मानिस शरीरमा जिउँछ, जसको अर्थ ऊ मानव नरकमा, अनि परमेश्‍वरको न्याय र सजायविना मानिस शैतानजस्तै अशुद्ध छ। मानिसलाई कसरी पवित्र पार्न सकिन्थ्यो? परमेश्‍वरद्वारा दिइने सजाय र न्याय नै मानिसको सबैभन्दा उत्तम सुरक्षा र सबैभन्दा महान् अनुग्रह हो भन्‍ने विश्‍वास पत्रुसको थियो। परमेश्‍वरको सजाय र न्यायद्वारा मात्रै मानिस बिउँझन सक्छ र उसले शरीरलाई घृणा गर्न, शैतानलाई घृणा गर्न सक्छ। परमेश्‍वरको कठोर अनुशासनले मात्रै मानिसलाई शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्छ, उसलाई आफ्‍नै सानो संसारबाट मुक्त गर्छ, र उसलाई परमेश्‍वरको उपस्थितिको ज्योतिमा जिउन दिन्छ। सजाय र न्यायभन्दा उत्तम मुक्ति कुनै छैन। पत्रुसले यसो भन्दै प्रार्थना गरे, “हे परमेश्‍वर! जबसम्‍म तपाईंले मलाई सजाय दिनुहुन्छ र न्याय गर्नुहुन्छ, तबसम्‍म म तपाईंले मलाई छोड्नुभएको छैन भन्‍ने थाहा गर्नेछु। तपाईंले मलाई आनन्द वा शान्ति नदिनुभए तापनि, र मलाई कष्टमा जिउन दिनुभए तापनि, र ममाथि अनगन्ती सजायहरू दिनुभए तापनि, जबसम्‍म तपाईं मलाई छोड्नुहुन्‍न, तबसम्‍म मेरो हृदय सहजतामा हुनेछ। आज, तपाईंको सजाय र न्याय मेरो सबैभन्दा उत्तम सुरक्षा र मेरो सबैभन्दा महान् आशिष बनेका छन्। तपाईंले दिनुहुने अनुग्रहले मलाई सुरक्षा दिन्छ। आज तपाईंले मलाई दिनुहुने अनुग्रह तपाईंको धर्मी स्वभावको प्रकटीकरण हो, र सजाय र न्याय हो; यसको साथै, यो एउटा परीक्षा हो, र, त्योभन्दा पनि बढी, यो कष्टको जीवन हो।” पत्रुसले आफ्‍ना शरीरका सुख-चैनहरूलाई पन्छ्याएर गहन प्रेम र महान् सुरक्षाको खोजी गर्न सके, किनभने उनले परमेश्‍वरको सजाय र न्यायबाट अत्यन्तै धेरै अनुग्रह प्राप्त गरेका थिए। आफ्‍नो जीवनमा, यदि मानिस शुद्ध पारिन चाहन्छ र आफ्‍नो स्वभावमा परिवर्तन प्राप्त गर्न चाहन्छ भने, यदि उ अर्थपूर्ण जीवन जिउन र प्राणीको रूपमा रहेको आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्न चाहन्छ भने, उसले परमेश्‍वरको सजाय र न्यायलाई स्वीकार गर्नैपर्छ, र आफूबाट परमेश्‍वरको अनुशासन र परमेश्‍वरको प्रहारलाई टाढा जान दिनु हुँदैन, ताकि उसले आफैलाई शैतानको चालबाजी र प्रभावबाट स्वतन्त्र गर्न सकोस्, र ऊ परमेश्‍वरको ज्योतिमा जिउन सकोस्। परमेश्‍वरको सजाय र न्याय नै ज्योति, र मानिसको मुक्तिको ज्योति हो, र मानिसको लागि योभन्दा उत्तम आशिष, अनुग्रह वा सुरक्षा कुनै छैन भन्ने जान। मानिस शैतानको प्रभावमा जिउँछ, र शरीरमा अस्तित्वमा छ; यदि उसलाई शुद्ध पारिएको छैन र उसले परमेश्‍वरको सुरक्षालाई प्राप्त गर्दैन भने, मानिस अझै भ्रष्ट बन्‍नेछ। यदि उसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न चाहन्छ भने, उसलाई धोइन र मुक्त गरिनैपर्छ। पत्रुसले प्रार्थना गरे, “परमेश्‍वर, तपाईंले मसँग दयालु व्यवहार गर्नुहुँदा म प्रसन्‍न हुन्छु, र सान्त्वनाको महसुस गर्छु; जब तपाईंले मलाई सजाय दिनुहुन्छ, म अझै बढी सान्त्वना र आनन्दको महसुस गर्छु। म कमजोर भए पनि, र मैले असीमित कष्ट सामना गरे तापनि, त्यहाँ आँसु र दु:ख भएतापनि, यो दु:खको कारण मेरो अनाज्ञाकारीता, र मेरो कमजोरी नै हो भन्ने तपाईं जान्नुहुन्छ। म बिलौना गर्छु किनभने म तपाईंका इच्‍छाहरूलाई पूरा गर्न सक्दिनँ, म शोक र अपसोसको महसुस गर्छु किनभने तपाईंका मापदण्डहरूका लागि म अपर्याप्त छु, तर यो क्षेत्र प्राप्त गर्न म इच्‍छुक छु, तपाईंलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि मैले सक्‍ने सबै गर्न म इच्‍छुक छु। तपाईंको सजायले मलाई सुरक्षा दिएको छ, र मलाई उत्तम मुक्ति दिएको छ; तपाईंको न्यायले तपाईंको सहनशीलता र धैर्यतालाई ढाकेको छ। तपाईंको सजाय र न्यायविना, म तपाईंको कृपा र दयामा रमाउने थिइनँ। आज, तपाईंको प्रेमले स्वर्गहरूलाई माथ गरेको छ र अरू सबै थोकहरूलाई उछिनेको म अझै बढी देख्‍छु। तपाईंको प्रेम त कृपा र दया मात्रै होइन; त्योभन्दा पनि बढी, यो सजाय र न्याय हो। तपाईंको सजाय र न्यायले मलाई धेरै कुरा दिएको छ। तपाईंको सजाय र न्यायविना, एक जना व्यक्तिलाई पनि शुद्ध पारिँदैनथ्यो, र एक जना व्यक्तिले पनि सृष्टिकर्ताको प्रेमलाई अनुभव गर्नेथिएन। मैले सयौं परीक्षाहरू र संकष्टहरूको सामना गरेको, र म मृत्युको नजिक पुगेको भए तापनि, ती सबैले मलाई साँचो रूपमा तपाईंलाई जान्‍न र सर्वोच्‍च मुक्ति प्राप्त गर्न दिएको छ। यदि तपाईंको सजाय, न्याय र अनुशासन मबाट टाढा भएको भए, म अन्धकारमा, शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिउनेथिएँ। मानिसको शरीरसँग के लाभहरू छन् र? यदि तपाईंको सजाय र न्यायले मलाई छोडेको भए, यो तपाईंको आत्माले मलाई बिर्सिनुभएको जस्तो हुनेथियो, तपाईं मसँग त्यस उप्रान्त नहुनुभएको जस्तो हुनेथियो। त्यसो भएको भए, म कसरी जिइरहन सक्थेँ र? यदि तपाईंले मलाई रोग दिएर मेरो स्वतन्त्रतालाई लिनुभएको भए, म जिइरहन सक्थेँ, तर तपाईंको सजाय र न्यायले मलाई कहिल्यै छोडेको भए, म जिइरहने कुनै उपाय थिएन। यदि म तपाईंको सजाय र न्यायविना थिएँ भने, मैले तपाईंको प्रेमलाई गुमाउनेथिएँ, जुन प्रेम मेरो यति गहन् छ कि म त्यसलाई शब्‍दमा भन्‍न सक्‍दिनँ। तपाईंको प्रेमविना, म शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिउनेथिएँ, र तपाईंको महिमित अनुहारलाई देख्‍न असमर्थ हुनेथिएँ। म कसरी निरन्तर जिउन सक्थेँ र? मैले त्यस्तो अन्धकार, त्यस्तो जीवनलाई सहन सक्‍दिनँ थिएँ। तपाईं मसँग हुनु भनेको तपाईंलाई हेर्नु जस्तै हो, त्यसकारण म तपाईंलाई कसरी छोड्न सक्थेँ र? मेरो सबैभन्‍दा महान् सान्त्वनालाई मबाट नलैजानुहोस् भनेर म तपाईंलाई अनुरोध गर्छु, बिन्ती गर्छु, चाहे यो एक-दुई शब्‍दको निश्‍चयता नै किन नहोस्। मैले तपाईंको प्रेमको आनन्द लिएको छु, र आज म तपाईंबाट टाढा हुन सक्दिन; म तपाईंलाई प्रेम नगरिकन कसरी बस्‍न सक्थेँ र? तपाईंको प्रेमको खातिर मैले शोकका धेरै आँसु बगाएको छु, तैपनि यस्तो जीवन अझै अर्थपूर्ण छ, यसले मलाई अझै समृद्ध तुल्याउनसक्छ, मलाई अझै बढी परिवर्तन गर्नसक्छ, र सृष्टि गरिएका प्राणीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सत्यतालाई प्राप्त गर्न यसले मलाई अझै बढि सक्षम तुल्याउँछ भन्‍ने कुरालाई मैले सँधै अनुभव गरेको छु।”